Esi na vegetatively gbaa cacti - Ntinye nwa - 2019
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara mmepụta nke vegetation nke cacti
N'ime osisi ndị dị n'ime ime ụlọ, cacti so n'ime ndị mmadụ kachasị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọdịdị ha nwere ike ọ gaghị adị ka ihe mara mma dị ka mpụga nke ndị ọzọ na-acha akwụkwọ ndụ bi na windo sill, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ ha. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta osisi a n'ụlọ, mgbe ahụ ịmara banyere usoro mmeputakwa nke cactus ga-aba nnọọ uru.
E nwere ọtụtụ ụzọ nke cactus ozuzu, nke kachasị mfe bụ iji cuttings na ụmụ sitere na ndị toro eto. Ntughari nwa nke cactus abụghị usoro mgbagwoju anya dị ka o nwere ike iyi ka ọ na-ele anya na mbụ, ma ugbu a ị kwenyesiri ike na nke a.
Mgbe ịcha cacti
Mgbe ọ bara uru ịkụcha cactus
Kedu ka esi eduzi cacti
Cacti ịzụ ụmụ
Ịgba ọgwụ na cacti
Ntak emi ẹkụt cacti
Kedu ọnọdụ a ga-ahụ n'oge ịgba ọgwụ mgbochi
Cacti ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Lekọta cacti mgbe usoro nhazi
Mmeputakwa nke cacti cuttings
A na-eji mkpụrụ osisi na-eme ihe mgbe ọ dị mkpa iji mụbaa ọnụ ọgụgụ ha ngwa ngwa, chekwaa ụdị ọrịa ahụ, ma ọ bụ tụgharịa ụdị ọ bụla achọpụtara. Mmeputakwa nke cacti site na cuttings agaghị ewe oge dị ukwuu, ma tupu usoro ahụ, ị ​​ghaghị iburu n'uche ụfọdụ n'ime nuances.
Ọ bụghị ọnwa nile nke afọ ga-adabara maka ọrụ a. Ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị belata mkpụrụ osisi ahụ ma ọ bụ na oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge ọkọchị, ebe ọ bụ na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ na n'oge oyi, ọtụtụ n'ime osisi ndị ahụ na-ezu ike. Ọ bụrụ na ileghara ndụmọdụ a anya ma belata osisi ahụ, ya onwe ya agaghị ata ahụhụ ma, dịcha, ga-agbanye mgbọrọgwụ, mana nne nwere ike ịnwụ.
Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụrụ na usoro a adịghị ezu. Dịka ọmụmaatụ, enwere okwu mgbe osisi na-eji nwayọọ nwayọọ nwụọ ma iji zọpụta ihe ọ bụla dịkarịa ala, ị ga-atụcha isi isi.
Tupu ị mụta otú e si eme ka cactus mụbaa n'ụlọ, ọ bara uru ikpebi ma ị chọrọ usoro a n'otu oge na oge. Enwere ọnọdụ ụfọdụ mgbe grafting osisi ga-adị mma. Ya mere, ọ bụrụ na stalk na cactus bụ otu, mgbe ahụ, usoro ahụ kwesịrị ime:
mgbe ọ dị ogologo ma jọọ njọ;
mgbe isi akụkụ nke osisi ahụ abụghị nanị ogologo oge, ma ọ nwere ike ibubata ite ahụ;
mgbe akụkụ nke elu nke cactus na-adị na shelf ma ọ bụ etiti nke windo na ọ nwere obere ohere;
ogwu na-agbanye aka na ala ma ọ bụ mgbọrọgwụ osisi ahụ amalitela ire ere.
Ọtụtụ mgbe, a na-ebelata mkpịsị nke okpokoro isi ka ọ dịchaa ma na-agbanye mgbatị ahụ, ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ogologo na-enye ohere, ị nwere ike belata oge ịse n'ime ọtụtụ iberibe (cuttings). A na-ejikarị osisi ndị nwere osisi dị iche iche na-ejikarị osisi emepụta maka mkpa nke onwe (ịba ụba cacti) ma ọ bụ dị ka onyinye.
Tupu ịmalite ịkụcha cactus, ị ga-akwadebe ihe niile dị mkpa na ngwa. Nke mbụ, ị ga-achọ mma mma dị nkọ, n'ihi na ọrụ nke ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-egbuke egbuke na egbugbere ọnụ dị mma ma ọ bụ mma agụba. Ịkwesịrị ịkwadebe mmanya maka nkwarụ, anwụrụ ọkụ, unwu ala, ite ma ọ bụ stovu nwere oghere drainage, obere pebbles ole na ole na ọkpụkpọ plastik buru ibu (ihe mmemme nke ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ kichin kichin na akwa silị ga-eme).
N'ihe banyere usoro mgbasa site na cuttings, ọ na-ewe ebe n'usoro na-esonụ. Iji malite, họrọ nne osisi nke ga-egbutu ma chọpụta kpọmkwem ebe nke ịkpụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na cactus nwere osisi na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ naanị akụkụ ahụ ike ya nwere ike belata.
Mgbe nke ahụ gasị, were ngwá ọrụ ịhọrọ (razor ma ọ bụ mma) họrọchaa ya.
Ugbu a, site na iwepụta cactus n'azụ okpueze ahụ na kuki ma ọ bụ kichin kichin (ị ghaghị ịkpachapụ anya nke ọma ka ị ghara ịgbaji ogwu) ị nwere ike belata akụkụ ahụ chọrọ nke azu. Ọ bụrụ na ịnweghị tweezers ma ọ bụ kichin kichin n'okpuru ogwe aka gị, ị nwekwara ike iji eriri akwụkwọ: a na-apịkọta akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'ọtụtụ ebe ma na-agbanye mgbọrọgwụ nke osisi ahụ ọtụtụ ugboro.
Mgbe ogbucha ahụ dị n'aka gị, tinye ya na mpempe akwụkwọ dị ọcha (n'akụkụ ya) ma hapụ ya na ebe dị jụụ maka ụbọchị 2-4, bụ mgbe mkpụ osisi ahụ kụrụ ntakịrị. N'ọnọdụ ahụ mgbe a na-egbutu osisi site na osisi na-arịa ọrịa, ọ ka mma ịkwanye ya n'egbughị ọkụ ozugbo, na-ahapụ ya ọbụna n'ụgbọelu, ma n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ka mma ịkụzi ịkpụ dịka pensụl. N'oge osisi vegetative propagation nke osisi n'ụzọ dị otú a, mkpịsị aka e dere na-eme ka mgbọrọgwụ siri ike ngwa ngwa.
N'ọzọ ọzọ, a na-awụnye mmiri dị nro pụrụ iche n'ime ite ma na-agbanye ya. Mgbe ahụ, a na-etinye nkume dị iche iche n'elu ala, mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye osisi ndị a mịrị amị ruo ọtụtụ ụbọchị n'agbata ha n'akụkụ nkewa. Ọ bụrụ na akụkụ nke oge ịse ahụ dị oke mkpa ma bụrụ nke a na-ejighị n'aka, a na-etinye nkwado ọzọ na ite ahụ ma jiri eriri ajị kpuchie ya. Ịnwere ike itinye akụkụ ahụ nke cactus ozugbo n'ime ala, ma na nke a, ọ ghaghị kpam kpam. Mgbe mmiri na-emetụ ya n'ahụ, osisi ahụ ga-esi ngwa ngwa nwụọ ma nwụọ.
Ị ma? Mgbe cacti na-agbanye site na mbepụta mkpụrụ kama ichikota mmiri dị elu ka mma iji nnukwu pebbles. Enwere ike iwepụ ha ngwa ngwa iji hụ ma mgbọrọgwụ apụta ma ọ bụ. Otú ọ dị, echela n'okpuru cactus ugboro ugboro, ebe ọ bụ naanị ị nwere ike imerụ ya. Ozugbo mgbọrọgwụ na-eto nke ọma, ha ga-abụ ndị a ma ama.
N'ịnwụnye ihe ndị ahụ n'ime ite, ọ na-anọgide na-etinye ebe ahụ n'okpuru ọkụ na-egbuke egbuke (windo dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ga-aka mma) ma chere ka mgbọrọgwụ pụta. Ha na-amaba mgbe izu ole na ole gasịrị, ọ bụ ezie na usoro a nwere ike iwe oge.
Dị ka ntụgharị ọzọ nke akụkụ nke nne na-egbutu osisi, ị nwere ike iji akpa na mmiri. Ekwesịrị m ikwu na n'ọnọdụ ụfọdụ, mgbọrọgwụ ga-apụta ngwa ngwa karịa ala. A chọrọ ka ị wụsa ntakịrị mmiri na ala nke ike ahụ, belata ite si na karama plastic ma mee ka ịcha belata ka oke belata 5 mm n'elu mmiri. Ka mmiri na-ekpochapu, ọ ghaghị ịmeghachi ya ugboro ugboro, ma ozugbo mgbọrọgwụ malitere ịmalite, ọ ga-ekwe omume ịkụ osisi ahụ n'ala na-emeghe (ọ bụghị iji lie ya, kama tinye ya n'elu ala).
Site n'ụzọ, mkpịsị nke cactus na-emekarị mgbọrọgwụ ọbụnadị dinara na shelf, ma na-ehichapụ ya na ntanetị, ha ga-apụta n'elu akụkụ nile nke ịkpụchasị ihe karịa. N'otu oge ahụ, mgbe a kụrụ ya n'ọkwá dị elu, mgbọrọgwụ kachasị na-apụta site n'akụkụ nke ụgha ahụ.
Na mgbakwunye na mgbasa site na grafting, usoro vegetative usoro cacti na-enye maka iji ụmụ nke osisi. Akuku nke cactus bu n'obi maka mmeputara ya, ya mere i ghaghi eche echiche banyere oge isi kewapu umuaka site na nne ohia. Ka o sina dị, ọ bụ ezie na ọ dị mfe iji kwụsị ha, ọ ka mma iji mma dị nkọ wepụ "nne", nke ga-enyere aka izere nsogbu na-adịghị mkpa ma nwa ma nne na-akụ.
Na mgbakwunye, n'oge usoro nkewa, jide n'aka na o nweghi akụkụ nke obere osisi fọdụrụ na cactus, na, n'ụzọ ọzọ, enweghi ihe ọ bụla nke cactus buru ibu n'ahụ nwa ahụ. Obughị ime ihe iwu a nwere ike iduba na ha abụọ, ya mere, ịghọta otú e si mụta nwa ụmụ cactus, a ghaghị iburu ihe a n'uche.
Nkewa nke cactus n'ụzọ dị otú a ka mma kacha mma na oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge ọkọchị, n'ihi na n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi, nsị nke "ụmụ ọhụrụ" dị njọ. Tupu tupu ebido, nwa ahụ, dịka ịcha, kwesịrị ntakịrị ntakịrị ntakịrị ka ọ na-esite n'izu, tinye ya na akọrọ, ebe dị ọkụ ma na-enwu gbaa n'ọnọdụ ziri ezi. N'okwu a, usoro mgbọrọgwụ ga-adị ngwa ngwa, na ohere nke ire nke mkpụrụ ga-abụ ihe efu.
Otu n'ime oge kachasị mkpa iji zaa ajụjụ banyere otú ị ga-esi gbanye cactus n'ime ụmụ bụ iji ihe kwesịrị ekwesị. Ihe dị iche iche na-enye nkọwa dị iche iche banyere ngwakọta nke ngwakọta ala, ma otu n'ime nhọrọ kachasị nke ọma bụ ngwakọta nke ájá ájá, ájá na sphagnum moss, nke dị iche iche. Banyere ịzụta ụmụ ọhụrụ, tupu e guzobe mgbọrọgwụ, a ghaghị ime nke ọma, ebe ọ bụ na ọ ga-adịrị mgbe ọ ga-agbanwe na mmiri na-agabiga.
Ị ma? Ma ọnwụ ma nwa nke cactus ga-adịkwu mfe na ike naanị ma ọ bụrụ na ha dị nso n'elu cactus.
Dị ka ị nwere ike ịgbanye ụmụ ọhụrụ cacti ma ọ bụ cuttings, anyị achọpụtaworị, ma eleghị anya ị chọpụtara na n'ime usoro ndị a ọ dịghị ihe mgbagwoju anya. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ usoro nke grafting a cactus, nke gụnyere ntụgharị nke akụkụ nke ị ga (na-abụkarị ngalaba ma ọ bụ isi) nke ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na cacti ndị ọzọ na-enwekwu ntachi obi. Mgbe akụkụ nke akụkụ abụọ dị iche iche, otu ihe atụ kachasị elu pụtara.
Site na nchikọta osisi, kụọ osisi buru ibu, ọ bụghị naanị n'ime ime ụlọ, kamakwa ndị na-elekọta ubi, mana maka cactus, e nwere ọtụtụ ihe kpatara ịme usoro a. Ya mere, a pụrụ ime ọgwụ mgbochi mgbe:
ịkwesịrị ime cactus nke siri ike inyefe oge ntoju;
chọrọ iji zọpụta osisi ahụ site na ọnwụ n'ihi mgbọrọgwụ nke mgbọrọgwụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha gbanwee);
ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ọnwụ ahụ n'ụzọ ọzọ bara uru;
tupu ị lee anya, nke siri ike ịnọgide na-enwe, ọ bụrụ na ọ na-eto na mgbọrọgwụ ya;
naanị na-eche ihe ga-eme n'ihi nchịkọta nke ụdị abụọ dị iche iche.
Maka uru ya nile, gracting cactus ka nwere otu isi azụ - ọ fọrọ nke nta ka osisi ndị a nyadoro na-adịghị adịgide adịgide, ebe ọ bụ na arụ ọrụ arụpụtaraghị ha.
Dị ka ọ na-emepụta nke cacti cuttings ma ọ bụ ụmụaka, mgbe a na-agbagharị site na grafting nwere àgwà na usoro nke usoro ya. Nke mbụ, ọ dị mkpa iburu n'uche oge ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ dị mma ịkụ osisi na mmiri ma ọ bụ n'oge okpomọkụ, ma ọ bụrụ na, n'ezie, mgbe cactus na-agbanwe agbanwe na enwere nnukwu ihe ịga nke ọma nke na-efunahụ ihe atụ bara uru. Otú ọ dị, ọbụna n'ọnọdụ a, ihe ga-esi na usoro ahụ pụta nwere ike ọ gaghị adị mma. Ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ, ị ghaghị ịbanye na oyi, mgbe ahụ ka ịmalite ngwaahịa cactus kwesịrị ibute n'ọnọdụ nke ibu, ịmalite ịkụzi osisi ahụ na ịmepụta okpomọkụ n'ime ụlọ (ị nwere ike ịmegharị ite ahụ n'ime ụlọ ọzọ).
Ngwaahịa ha na-akpọ cactus nke ha na-atụnye akụkụ nke ụdị ndị ọzọ, na iji nwee ihe ịga nke ọma, ọ ghaghị inwe usoro mgbọrọgwụ dị mma ma dị mma, na-enwe ọnọdụ nke na-eto eto. Ya mere, ọ bụ naanị ezigbo osisi ohia kwesịrị ekwesị maka ọrụ nke ngwaahịa, bụ nke a na-atụgharịghị ihe dịka otu ọnwa tupu inoculation ma ọ gaghị adị mfe ịmalite ụmụaka. Ọtụtụ mgbe, Eriocereus jusbertii ji dịka ngwaahịa, nke kpatara ya bụ unpretentiousness nke cactus a na ọsọ nke uto ya.
O doro anya, n'oge usoro ahụ, ihe ọ bụla ga-abụrịrị ihe na-enweghị isi, nke a ga-eji mmanya na-egbu ha. Banyere cacti onwe ha (a na-ewere grafts na rootstocks), mgbe nke ọ bụla n'ime ha dị mma ka ehichapụ ya na ịṅụ mmanya.
Site n'ibi cactus, ị ga-enwe oge iji tinye akụkụ nke osisi nke abụọ na ya, ebe ọ bụ na ịkpụ ahụ aghaghị ịdị ọhụrụ. A ghaghị ijikọta ngwaahịa ahụ na scion n'ụzọ dị otú ahụ na mgbanaka cambial ha na-adabara dị ka o doro anya na ọ ga-ekwe omume ha na diamita ha dịka otu. Ọganihu nke ịgba ọgwụ mgbochi dum na-adabere na nke a. Cambium - mkpụrụ ndụ sel nke anụ ahụ mmụta, nke dị na nkpuchi nke cactus na mgbọrọgwụ. A na-ede ya n'ụdị mgbanaka ma na-ahụ anya na ịkpụ. Nlekọta ndị na-eduzi nke abụọ sitere na mkpụrụ ndụ ndị a, ma ọ bụrụ na eriri aka aka na mgbọrọgwụ adaba, ọ bụrụ na, n'ezie, ha enweghị oge iji kpochaa, ha na-etolite ọnụ. Ihe ndị ọzọ yiri mgbaaka, nke ka mma.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ osisi abụọ ahụ kwesịrị ịdị na ntanetị, ọbụnakwa, na mgbakwasa ejikọta cacti kwesịrị ijide ha (ma ọ bụghị ịkpụ n'ime anụ ahụ nke azu).
Ozugbo ị kwadebere cacti na ịṅụ mmanya na-aba n'anya, ịnwere ike ịmịpụ n'elu site na ngwaahịa na iji aka nke osisi ọzọ. A ghaghị ịkọkọta akụkụ ndị ahụ ozugbo ha kpụchara, tupu ha amalite ịkụ na oxidize. Iji pịa aka na ngwaahịa, a na-atụ aro ka ị jiri mgbatị na-agbanwe ma ọ bụ eri. A na-akwadebe mkpịsị cactus site na ịcha na agụba nke dị n'elu, na afọ nke ịcha ọ dịghị mkpa. Mgbe ị na-akụtu osisi, soro usoro ahụ nke ọma dịka o kwere mee ka a ghara iberibe ma ọ bụ ata ata akụkụ nke ihe ndị ahụ. Ị nwere ike wụsa slices nke sọlfọ colloidal ma ọ bụ gwakọtara unyi, nke ga-echebe cacti pụọ na ọrịa site na ebu na ire ere. N'ikpeazụ, nkà na ụzụ nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa abụghị nke dị mgbagwoju anya, ma onye ọ bụla na-ere osisi na-ekwenye na ihe ịga nke ọma na njedebe ikpeazụ dabeere na nhọrọ ziri ezi nke ngwaahịa, nke a ga-anyadokwa cactus. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe dị mkpa bụ njedebe nke omume nile, ma ọ bụrụ na ihe mejọrọ, usoro ahụ wee malite ịgbasie ike, ma ọ bụrụ na ọ ga - eme ka ọ dị ọhụrụ (ha ekwesịghị ịbụ nkụ), ma ọ bụ kpuchie akụkụ ndị ahụ na ihe nkiri nri. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe ọṅụṅụ nwere ike ịdị oke ọkụ n'obi na ngwaahịa, nke ga-egbochi nchịkọta ziri ezi na nchikota nke mgbaaka mgbanaka ahụ, n'ihi ya, ị ga-ebuba na gauze tupu oge eruo.
Ọ dị mkpa! N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-eji diski ma ọ bụ ákwà akwa hichapụ ngalaba, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịhapụ ụrọ.
Ekwesiri ịdebe cacti ugbu a na ebe na-ekpo ọkụ na akọrọ nke a ga-echebe nke ọma site na ìhè anyanwụ kpọmkwem. Ọzọkwa, saịtị ịgba ọgwụ mgbochi ahụ, yana oghere ndị na-emeghe, na-echebekwa ha ka mmiri ghara ịmalite ha n'oge usoro mmiri mmiri. Ị nwere ike ikpuchi cactus na ite iko.
Usoro mmegharị ahụ na-adịru otu ọnwa, ma ị nwere ike ịtọpu kịngọm na-ejide cactus n'ime izu, mgbe ụbọchị asaa gasịrị, ị ga-ewepu ya kpamkpam.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-ejikwa usoro ndị ọzọ nke ịgba ọgwụ mgbochi: dịka ọmụmaatụ, na-eji obere osisi ma ọ bụ nkewa na scion cactus na-edozi site na spikes, ma nke a bụ, dịka ha na-ekwu, "aerobatics".
Kedu usoro ọ bụla ị ga-esi gbanwee nke cactus n'ụlọ gị, ị kwesịrị ị na-agbaso ihe niile chọrọ maka usoro a, ma ọ bụrụ na enwere ohere ịhapụ ma osisi abụọ: aka na ngwaahịa.
Na uzo na akwukwo Red: ebee ka ugo si esi n'ulo nnukwu obodo? Ihe iri na abuo mere umu ahụhụ ndia ji kwusi
Otuku dị iche iche na Potato dị iche iche "Colombo" ("Colomba"): àgwà, ihe nzuzo nke ịkụ ọgaranya
Esi ísì ụtọ n'oge mgbụsị akwụkwọ - Manchurian mma piom
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara mmepụta nke vegetation nke cacti